Nei Chigadzirwa Vhidhiyo iri Yekutanga uye 5 Mhando dzeMavhidhiyo aunofanirwa Kugadzira | Martech Zone
Nei Chigadzirwa Vhidhiyo iri Yekutanga uye 5 Mhando dzeVhidhiyo Iwe yaunofanirwa Kugadzira
China, Kukadzi 18, 2016 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
2015 raive rekodhi-rekutyora gore rezvigadzirwa vhidhiyo, ine vhidhiyo maonero kukwira 42% kubva 2014. Iyo haisi iyo nyaya yese, zvakadaro. 45% yeese mavhidhiyo anoonekwa pa nharembozha. Muchokwadi, mukota yekupedzisira ya2015, Mavhidhiyo mavhidhiyo maonero akakura ka6 nekukurumidza kupfuura desktop desktop maonero Iyi nedzimwe dhata dzakapihwa muInvodo's 2015 Chigadzirwa Vhidhiyo Mabhenji Mepu ine vese vatengesi vekururamisa vanoda kushandisa zano revhidhiyo… nekukasira.
Dhawunirodha Invodo's 2015 Chigadzirwa Vhidhiyo Mabhenji Mapeji
Isu tanga tichishanda nevose vedu vatengi kuona kuti yavo yemukati zano inosanganisira:
Anotsanangura Mavhidhiyo - kutsanangura zvizere nyaya dzakaomarara idzo zvigadzirwa zvavo kana masevhisi anobatsira nazvo, zvichipa kunzwisiswa kuri nani, kumisikidzwa, kuita pamwe nekutendeuka.
Chigadzirwa Kushanya - kufamba-kuburikidza kwechigadzirwa maficha kana maitiro ayo ako kambani anogona kubatsira nawo.
Testimonials - hazvina kukwana kuisa chigadzirwa chako kana sevhisi, iwe unofanirwa kuve nemavhidhiyo evatengi nevatengi chaivo vanotaura zvavakakwanisa kuwana.
Kufunga Hutungamiri - kupa mavhidhiyo anobatsira vatengi vako kuwana budiriro mukati mekambani yavo kana neako chigadzirwa kana sevhisi kuchawedzera kukosha kwako kwavari.
Sei-kuVhidhiyo - vatengi vazhinji vangade kudzivirira mafoni uye ma screenshares kuti vadzidze maitiro ekuita zvinhu. Kupa raibhurari yekuti sei-kumavhidhiyo kunogona kubatsira vatengi vako kukurumidza kugadzirisa nyaya uye kuwedzera kushandisa kwavo zvigadzirwa zvako.
Heano Invodo's Infographic, Chigadzirwa Vhidhiyo uye Kuputika Kwenhare: 2015 Chigadzirwa Vhidhiyo Benchmarks Recap.
Tags: invodomobile videomobile vhidhiyo kukurachigadzirwa vhidhiyochigadzirwa vhidhiyo mabhenjikukura kwevhidhiyovhidhiyo infographicmavhidhiyo manhamba
Iko Kukanganisa kweCustom Packaging pane Yako Ecommerce Kutengesa?